ဆားကြမ်းနင်းပြီး အကျိုး ၉ မျိုးခံစားမယ် (ကျွန်မကတော့ ထိပ်ပြောင်မှာအရမ်းကြောက်တယ်) - PS Myanmar
ဆားကြမ်းနင်းပြီး အကျိုး ၉ မျိုးခံစားမယ် (ကျွန်မကတော့ ထိပ်ပြောင်မှာအရမ်းကြောက်တယ်)
ကျမ ကတော့ ကျန်းမာမယ်ဆို လှပမယ်ဆို အထူးဂရုပြုလေ့ရှိပါတယ်…..။
ကျမ ဆံပင် ထိပ်ပြောင်မှာ အရမ်းကြောက်တယ်
အဲ့ဒါလေးကတော့ ဆားကြမ်းလေးနင်းတာပါပဲ…ဆားကြမ်း ၂ ပိဿာ ၈၀၀ ကျပ်ဖိုးဆိုတစ်လလောက် အသုံးပြုလို့ရပါတယ်….
နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ရေချိုး ခါနီး တိုင်းဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။
ညဘက် နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ …မနင်းခင် ခြေထောက်ကိုပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါခြောက်အောင်သုတ်ပါ…။
(ဆား ၂ပိသာ ဆို ပိုကောင်း) ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ…။နာရီဝက်လောက် ဆက်တိုက်နင်းရင်းနဲ့ ခြေထောက်ကချွေးများ ထွက်လာတာ တွေ့ရပါမယ်…။
မိနစ် ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယ်ကျေနပ်သည်ထိ နင်းပြီးတာနဲ့…မနင်းခင် အသင့်ဆောင်ထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ခြေထောက်ကို ဆားဇလုံထဲ ပွတ်ချပြီးဆားတွေပြောင်အောင်သုတ်ပါ…
ခြေထောက်ကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရေပြန်မဆေးရပါ…ခြေထောက်ပြောင်တာနဲ့ အိပ်ယာဝင်ပါ…ပထမနေ့မှာပဲ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်ပါမယ်…။အကြောပြေ.. ခြေကျဉ် ထုံနာတွေ ပျောက်ကင်း..ခြေကွဲခြင်း မရှိ… ဆံပင် မကျွတ်တော့ပဲ…နဂိုဆံပင်သန်သူတွေ ပိုပြီး ဆံပင်တွေသန်လာမည်ကျန်းမာခြင်းကိုရရှိစေမှာပါ…..။
Kyilwinmyint-mudra ပြောပြတဲ့ နံနက်ရေမချိုးမီ ဆားနင်းခြင်းအကျိုး
(၁) မလိုအပ်သောအပူအောင်းနေသောအခိုးအငွေ့များ ခြေဖဝါးမှတစ်ဆင့် ထွက်သွားနိုင်သည်။
(၃) ကြာကြာနင်းလျှင်ခါးမှအပူများဆင်းသဖြင့် ခါးနာသက်သာစေနိုင်သည်။
(၉) အမျိုးသားဆီးကျိတ်ရောဂါရှိသူများ ဆီးကျိတ်ကြီးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်။
ဆားနင်းခြင်းကို နံနက်အိပ်ယာထညအိပ်ယာဝင် နှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ခွက်တွင် ဆားနှစ်ပိသာအနည်းဆုံးထည့်ပါ ပြီးလျှင်ရေမစိုအောင်အုပ်ထားပါ။ တစ်လခန့်ကြာမှ ဆားအသစ်လဲပေးလျှင်ရပါသည်။
ဆားကြမ်းနင်းပြီး အက်ိုး ၉ မ်ိုးခံစားမယ် (က်န္မြကေတာ့ ထိပ်ျေပာင္မွာအရမ်းကြောက္တယ်)
က်မ ကေတာ့ က်န်းမာမယ္ဆို လွပမယ္ဆို အထူးဂရျုပုလေ့ရွိပါတယ်…..။
က်မ ဆံပင် ထိပ်ျေပာင္မွာ အရမ်းကြောက္တယ်
အဲ့ဒါလေးကေတာ့ ဆားကြမ်းလေးနင်းတာပါပဲ…ဆားကြမ်း ၂ ပိဿာ ၈၀၀ က်ပ္ဖိုးဆိုတစ္လေလာက် အသုံျးပုလို့ရပါတယ်….
နေ့ စဉ် အ ခ်ိန် မွန် ရေခ်ိုး ခါနီး တိုင်းဆားနင်းရင် ကိုယ္တြင်းအောင်းပူတြေ ထြက်စေသည်။
ညဘက် နင်းပုံနင်းနည်းကေတာ့ …မနင်းခင်ျေခေထာက္ကိုပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလာင်းဆေးပျါေခာက်အောင်သုတ္ပါ…။
(ဆား ၂ပိသာ ဆို ပိုကောင်း) ဆန့္တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး နင်းပါ…။နာရီဝက်လောက် ဆက္တိုက္နင်းရင်းနဲ့ျေခေထာက္ကေချြးမ်ား ထြက္လာတာ တြေ့ရပါမယ်…။မိနစ် ၃၀ -၄၀ – ၁နာရီ ကိုယ်က်ေနပ်သည္ထိ နင်းပြီးတာနဲ့…မနင်းခင် အသင့်ဆောင္ထားတဲ့ ပုဝါနဲ့ျေခေထာက္ကို ဆားဇလုံထဲ ပြတ္ခ်ပြီးဆားတျြေပာင်အောင်သုတ္ပါ…
ျေခေထာက္ကို လုံးဝ(လုံးဝ) ရျေပန္မေဆးရပါ…ျေခေထာက်ျေပာင္တာနဲ့ အိပ်ယာဝင္ပါ…ပထမေန့မွာပဲ နွစ်ခြိုက္စြာ အိပ်ပေ်္ပာါမယ်…။အေကြျာေပ..ျေခက်ဉ် ထုံနာတြေ ပေ်ာက္ကင်း..ျေခကျြဲခင်း မရွိ… ဆံပင် မကျတ်ြတော့ပဲ…နဂိုဆံပင်သန်သူတြေ ပိုပြီး ဆံပင်တြေသန္လာမည္က်န်းမျာခင်းကိုရရွိစေမွာပါ…..။
Kyilwinmyint-mudraျေပျာပတဲ့ နံနက်ရေမခ်ိုးမီ ဆားနင်ျးခင်းအက်ိုး
(၁) မလိုအပ်သောအပူအောင်းနေသာအခိုးအေငြ့မ်ားျေခဖဝါးမွတစ္ဆင့် ထြက်သြားနိုင်သည်။
(၂) ကေ်ာက္ကပ္တြင်အပူချိုခင်းမွကာကြယ်၍ ဆီးလမ်းကြောင်းကိုလည်းအက်ိုျးပုသည်။
(၃) ကြာကြာနင်းလျွင္ခါးမွအပူမ်ားဆင်းသျဖင့် ခါးနာသက်သာစေနိုင်သည်။
(၄)အထိုင္မ်ားသူ..ကားမောင်းမ်ားသူမ်ားအတြက် အေညာင်းရောဂါ အေကြာပိတ် အေကြာတင်ျးခင်းမ်ားမွ ကာကြယ္နိုင်သည်။
(၅) မ်က္စိအာရုံစိုက်ရသူမ်ား မ်က္မွန္တတ်ရသူမ်ားအတြက် မ်က္စိကြည်စေပြီး စျြဲမဲလုပ္လျွင္မ်က္စိဒီကရီက်ပြီး မ်က္မွန္လြတ်စေနိုင်သည်။
(၆)ဆံပင္ကျတ်ြသူမ်ား ဆံပင္ပါးသူမ်ား ဆံပင္နွစ္ခြကျြဲခင်းမ်ား သက်သာစေသည်။
(၇) ခေါင်းကိုက် မ်က်ရိုးကိုက် မ်က်ရည္က်သူမ်ား မ်က်ရည္လမ်းကြောင်းပိတ်သူမ်ားအတြက္လည်း အက်ိုးရွိစေနိုင်သည်။
(၈) သားအိမ္လမ်းကြောင်းပိတ်၍ သားသမီးမရသူမ်ား သားသမီးရေစနိုင်သည်။
(၉) အမ်ိုးသားဆီးက်ိတ်ရောဂါရွိသူမ်ား ဆီးက်ိတ်ကြီျးခင်းမွကာကြယ္နိုင်သည်။
ဆားနင်ျးခင်းကို နံနက်အိပ်ယာထညအိပ်ယာဝင် နွစ်ကြိမ်ျပုလုပ္နိုင်သည်။ ခြက္တြင် ဆားနွစ္ပိသာအနည်းဆုံးထည့်ပါ ပြီးလျွင်ရေမစိုအောင်အုပ္ထားပါ။ တစ္လခန့်ကြာမွ ဆားအသစ္လဲပေးလျွင်ရပါသည်။